Iikhampi eziphezulu zeKhemistry kwiQela eliQelayo
Ingaba unobutsha kumakhemikhali okanye umfundi onzulu okanye usosayensi, kukho ikhempi ekhethiweyo iimfuno zakho. Iikiti eziboniswe apha zivela kwiikiti zokuqala zabaphandi abancinci kwiikiti eziphambili kunye nezixhobo kunye neekhemikhali zamakhulu emvavanyo.
I-Thames kunye neKosmos zenza iikiti ezininzi ze- chemistry ezibandakanya i-glassware, iikhemikhali kunye neencwadi ezicacileyo zemisebenzi ezichaza indlela yokwenza iimvavanyo. Ezi kitshe zigqibelele nabani na abafuna i-full full lab lab lab, kubandakanya abafundi abafuna ukwanelisa iimfuno zasekhaya zasekhaya. Iikiti zeCom C1000 kunye neK Chem C2000 zinikeza iimvavanyo ezininzi kwixabiso loqoqosho. Ikiti yeKom C3000 yindlela ekhethekileyo epheleleyo ebeka ngokukhawuleza nge-lab chemistry kunye neekhemikhali ukwenza iimvavanyo zamakhulu. Nangona i-Thames neKosmos yenza iisethi eziphambili eziphezulu, inkampani yenza kwakhona iikiti zokuqala zezingane.
Ndiyathanda "Yimangalisa" ii-kemist kits zenzululwazi ezincinci (isikolo sangaphambi kwesikolo nakwibakala) kuba zibonakala zikhangeleka, ziquka iiprojekthi ezikhawulezayo, kwaye zimema izandla ekuhlolisweni. Iikiti ziza kwiipakethe zamabhola, kunye nolunye uhlobo lovavanyo (umz., I-marble jelly, i-slime, iqhwa eliyinyumba) okanye iibhegi eziqukethe iiprojekthi eziliqela. Kulula ukugcina izinto phakathi kwezilingo, iiprojekthi zikhuselekile kakhulu, kwaye uza kufumana iiyure eziliqela zokuzonwabisa kunye nemfundo kwiikiti nganye.
Iikiti ze-Smithsonian ziyakuthi zikhuphe iikristiti ezikhulayo ngenxa yokuba zibandakanya iikhemikhali ezinokuthenjwa nezikhuselekileyo ezikhulayo zibe ngama-crystals amahle. Uninzi lwezikiti zivelisa i-crystals njenge-jewel-like. Kukho iikiti zokukhanya kwamakristali kunye nee-geodes, nazo. Nangona ama-crystals angakhula naliphi na iqela leminyaka, iincwadi zokufundisa zilungelelaniso kubafana nakubantu abadala.
Unokwenza i-volcano yeekhemikhali kunye nezithako zasekhaya ngokulula kwaye kulula, kodwa iikiti ziyancomeka kuba zikulungele. Ndiyithanda kakhulu intonga ye-volcano yaseSmithsonian kuba ibonisa i-volcano enkulu eyenziwe ngaphambili kunye neekhemikhali ukwenza i-lava 'enemibala'. Xa ususetyenzise zonke izinto kwiikiti, ungayigcwalisa nge-baking soda, iviniga, kunye nombala wokutya ukuze ugcine umnandi.
Kukhona ezimbini iikiti zomlingo zenzululwazi ndizithandayo. I-Thames neKosmos "Iikethi yeSayensi okanye iMicrosoft" inikeza izixhobo kunye nemiyalelo yokuphinda iincwadana ezingama-20 zobugqi ngokusekelwe kwimigaqo yenzululwazi. Yisitiki esihle kumntu osemtsha ebantwini. Iingcingo zenzululwazi yenyama, kungekhona ngokusemgangathweni i-chemistry, kwaye zibandakanya ezinye iingcamango ezibonakalayo ezintle.
I-Science Explorer Magic Science kwieWebhu kuphela i-Kit ininzi malunga nokutshintsha kunye nombala utshintsho. Yikiti elihle kakhulu, elifanelekileyo ngokufanelekileyo kwisihlwele esingaphantsi kwe-10 okanye nabani na ofuna i-Harry Potter-themed kit chemistry. Ezinye iikhemikhali zekhaya eziqhelekileyo zifunekayo ukujikeleza eli setha.
Iiprojekthi zeSayensi zeNzululwazi zoBulungisa
Kutheni Iprojekthi Efanelekileyo YeSayensi?
Indlela yokwenza iPhepha leCromatographic With leaves
Udwebo kwiGrounds Grounds
Izikolo zikarhulumente zeeNkonzo zeZikolo zeeNkonzo zeZikolo zaseburhulumenteni zase-Pennsylvania, K-
Iincwadi ezinqatshelwe eMelika
Thatha uhambo oluya kwi-Zoo ngeSketchbook yakho kunye neZingcebiso ezimbalwa
Umhla woMlando we-Afrika-weMerika: ngo-1970 ukuya ku-1979
IPhasika: Ukutya okungavumelekanga
2010 I-Harley-Davidson Photo Gallery kunye nesiKhokelo soMthengi
UMTHETHO Imibuzo yokuSebenza yesiNgesi
Funda ngakumbi ngoMaria Montessori, uMsunguli weZikolo zeMontessori